Paris Saint-Germain ayaa ugu cadcad kooxaha doonaya adeega Lionel Messi oo kooxo badan… – Hagaag.com
Posted on 5 Diseembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Paris Saint-Germain ayaa waxay ka mid tahay kooxaha ugu cadcad ee ku guuleysan kara adeega Lionel Messi, kabtanka Barcelona, ​​kaasoo qandaraaskiisa Barca uu dhacayo xagaaga soo aadan.
Xagaagii la soo dhaafay, kooxda reer Catalan ayaa diiday dalabkii ahaa inuu ka tago kooxda “Bolga” mana aqbalin wadahadalo loogu iibinayo kooxo kale. Sida caadiga ah Messi ayaa qandaraaskiisu Camp Nou ku egyahay xilli ciyaareedkan, wuxuuna bilaabayaa inuu la hadlo kooxaha xiiseynaya adeegiisa haba ugu horeysee kooxda Paris St Germain bisha soo socota.
Sida laga soo xigtay wargeyska Isbaanishka ee Marca, Nasser Al-Khelaifi, madaxweynaha kooxda Faransiiska ee PSG, ayaa bilaabay inuu ka guuleysto xiddiga reer Argentine oo uu isku dayo inuu ka dhaadhiciyo inuu u dhaqaaqo “Princes Garden”.
Ifafaalaha ugu horeeya ee dhab ahaansha arrintani ee loo badinayaa hadalkii Neymar oo ah gooldhaliyaha PSG uu doonayo inuu mar kale ka garab ciyaaro Messi, tanina waxay dhici doontaa xilli ciyaareedka soo socda.
Sida laga soo xigtay wargeyska Isbaanishka, Paris Saint-Germain ayaa u soo bandhigi doonta Messi:
Paris Saint-Germain waa mid ka mid ah kooxaha ugu taajirsan adduunka, maadaama kooxda ay ku jiraan xiddigo caalami ah oo ay ka mid yihiin Neymar, Kylian Mbappe, goolhayaha reer Costa Rica Keylor Navaz iyo Ciyaaryahanka reer Argentine Mauro Icardi. Si kale haddii loo dhigo, kooxda Paris waxay awoodaa inay buuxiso dhammaan codsiyada dhaqaale ee Messi, xitaa mushaharka weyn ee sanadlaha ah ee uu haatan ka qaato Barça, oo lagu qiyaasay 100 milyan oo euro.
Ku guuleysiga Champions League ayaa weli ah mid ka mid ah himilooyinka waaweyn ee Paris Saint Germain, si loo gaaro aragtidaasi, Messi, oo 33 jir ah, ayaa laga yaabaa inuu noqdo qeybtii ugu dambeysay ee kooxdu u baahan tahay inay gaarto yoolkeeda. Haddii Messi uu kula guuleysto horyaalkan kooxda Paris Saint-Germain, waxaa qormi doona taariikh, iyadoo Messi uu dib ula soo noqon doonaa horyaalkii muddada dheer la sugayay tan iyo 2015-kii.
Ku darista Messi koox horey ciyaartoy waaweyn u heysatay sida Neymar, Mbappe, Icardi, Di Maria, Marco Verratti, Marcinus, Ravinia Alcantara iyo Leonardo Paredes, waxay la micno tahay in “Bolga”, Neymar waa saaxiibkiisa ugu dhow waxayna ku soo wada ciyaarayeen kooxda Barcelona sanadihii lasoo dhaafay.
Shaki kuma jiro in Barcelona ay ka mid tahay magaalooyinka ugu fiican ee lagu noolaan karo Yurub, laakiin Paris ma ahan mid ka liidata, waxayna leedahay dhammaan awoodaha iyo shuruudaha ay ku soo dhaweyn karto Messi iyo qoyskiisa.
Paris Saint-Germain ayaa gacanta ku heysa Horyaalka Faransiiska mana jirto cid kula tartameysa, sidaas darteed, kooxdu waxay awoodaa in ay ku guuleysan karto Champions League.